जिल्ला अस्पतालको काम 'रिफर' गर्ने ! - Everest Dainik - News from Nepal
जिल्ला अस्पतालको काम ‘रिफर’ गर्ने !
गाईघाट, फागुन ३० । दरबन्दीअनुसार विशेषज्ञ चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्कर्मीको पदपूर्ति हुन नसक्दा उदयपुर जिल्ला अस्पताल, गाईघाट रिफर सेन्टरमा परिणत भएको छ । जिल्ला अस्पतालमा प्राथमिक उपचारबाहेकका सेवा पाउन नसकेपछि बिरामीहरू महंगो रकम खर्च गरेर धरान, विराटनगरलगायतका सहरसम्म जान बाध्य छन् ।
५० शैयाको अस्पतालमा १० जना विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी छ । तर, विगत तीन महिनादेखि एकजना विशेषज्ञ चिकित्सकमात्र कार्यरत छन् । बाँकीको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । चारजना मेडिकल अफिसरको दरबन्दी भए पनि दुई जनामात्र कार्यरत छन् । बाँकी दुईजना अध्ययन बिदामा रहेको अस्पतालले जनाएको छ । आठजना स्टाफ नर्सको दरबन्दी रहे पनि दुई जनामात्र कार्यरत छन् । दुईजना अध्ययन बिदामा छन् भने बाँकी चारजनाको पदपूर्ति हुन बाँकी छ । ‘प्राविधिक कर्मचारीसमेत जोडेर ५९ जनाको दरबन्दी छ । तर, अहिले थोरै कार्यरत छन्,’ अस्पतालका सूचना अधिकारी विर्खबहादुर खत्रीले भने ।
याे पनि पढ्नुस अौलोबाट बच्न कीटनाशक झुल निःशुल्क वितरण
प्राथमिक सेवामै सीमित
जिल्लाकै ठूलो अस्पताल विशेषज्ञ चिकित्सकको पदपूर्ति हुन नसक्दा अस्पतालले प्राथमिक सेवामात्र उपलब्ध गराउन सकेको छ । करारमा रहेका डाक्टर करार अवधि सकेर फर्केर आउने क्रममा भएपनि उनीहरूले भरपर्दो सेवा दिन सकिरहेका छैनन् । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष खड्ग परियारले बेला–बेलामा सेवा ठप्प हुने गरेको बताए । ‘मैले चिकित्सक सरुवा हुनेबित्तिकै प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्री र संघीय सरकारलाई तुरुन्त अर्को डाक्टर व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको थिएँ । तर, अहिलेसम्म पदपूर्ति भएन,’ उनले भने, ‘त्यसैकारण बेलाबेलामा अस्पतालका सेवा ठप्प हुने गरेका छन् ।’ दरबन्दीअनुसार डाक्टर नभएपछि अस्पताल विकास समितिबाटै केही डाक्टर राख्ने निर्णय गरेर विज्ञापनसमेत प्रकाशित गरेको उनले जानकारी दिए ।
निःशुल्क औषधि अभाव
प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्थापन नगर्दा अस्पतालले निःशुल्क उपलब्ध हुनुपर्ने ७० प्रकारका औषधि मध्ये ३० प्रकारका औषधिमात्र उपलब्ध गराउन सकेको छ । औषधि खरिद गर्न प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गरिएको जिल्ला अस्पताल उदयपुरका सूचना अधिकारी तथा स्टोर किपर बृखबहादुर खत्रीले बताए । ‘कहिले नगरपालिकाले दिने, कहिले प्रदेश सरकारले दिने त कहिले संघबाटै आउने हल्ला चल्छ । तर आउँदैन,’ उनले भने ।
आन्तरिक आम्दानीबाट खरिद गरिएका तथा क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट आएको औषधिकै भरमा अस्पताल चलेको खत्रीले बताए । अहिले रहेको स्टक औषधिले एक वा दुई सातामात्र धान्नसक्ने उनले बताए ।
सुत्केरी गराउन पनि विराटनगर
अस्पतालमा कार्यरत प्रसूति सेवासम्बन्धी डाक्टर सरुवा भएर गएपछि जिल्ला अस्पतालमा तीन महिनादेखि प्रसूति सेवा ठप्प छ । उदयपुरको पहाडी क्षेत्र तथा खोटाङलगायत जिल्लाबाट आउने बिरामी उपचारका लागि मोटो रकम खर्चेर एम्बुलेन्समार्फत धरान तथा विराटनगरसम्म जान बाध्य छन् । प्रसूतिसम्बन्धि चिकित्सक पवन साह तीन महिनाअघि सरुवा भएर गएपछि उनको स्थानमा कोही पनि नआएकोे जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डाक्टर विष्णुबहादुर बस्नेतले बताए । ‘भएका चिकित्सकलाई सरकारले नै सरुवा गरेर पठाउँछ । त्यसैले समस्या छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै बालरोग विशेषज्ञ अनुपस्थित हुँदा बालरोग सेवा पनि ठप्प छ । मेडिकल अध्ययन सकेर प्राक्टिकल गर्न आउने चिकित्सकले बिरामीको चेकजाँच गर्ने गरेका छन् । नयाँ पत्रिकाबाट